« Ny tena fahaleovantena dia miantomboka aminao aloha» hoy i Ramose M. – Blaogin'i Voniary
« Ny tena fahaleovantena dia miantomboka aminao aloha» hoy i Ramose M.
Malagasy izy, Mpampianatra izy, izay ihany no satriny nampahafantarina ahy ! Izay no iantsoako azy hoe Ramose M. Rangahy sendra tafaresaka tamiko izy io, teo amin’ny toerana malalaka iray fipetrapetrahana (izay vitsy dia vitsy eto Antananarivo). Samy revo namaky boky aloha izahay, avy eo rehefa sendra nitraka dia nanomboka ny resaka. Resaka nahaliana tokoa satria nifandray ny tadin-dokanga. Resaka mikasika an’ity tanindrazantsika ity, ny fahantrany, ny hareny, ny hasiny, ny fombany, ny mponiny sy ny vahiny. Resaka… Aleo tsy ampiandrasina ela intsony ianao fa indro ny votoatiny tamin’izany resaka izany !
Fiankinan-doha : olana fototra eto Madagasikara
Ny zava-misy amin’izao fotoana izao, hoy i Ramose M, dia miankin-doha be loatra amin’ny any ivelany i Madagasikara. Ny fanjakana no voalohany amin’izany ary hitam-poko hitam-pirenena. Ny fahazoana famatsiam-bola avy any ivelany no ireharehana nefa mibaby trosa ny Malagasy vokatr’izany, eny na hatramin’ny zaza vao teraka sy izay taranaka any aoriana aza. Mipaka hatrany amin’ny rafi-pampianarana, ny rafitra ara-toekarena sy ny fomba fisainana ary ny fiainana andavanandro mihitsy io fiankinan-doha amin’ny any ivelany io. Raha ny hevitr’i Ramose M dia tokony hisy revolisiona lehibe eto amintsika ka hampiova ny rafitra sy izay zavatra rehetra misy amin’izao fotoana izao. Iza anefa no hitarika izany ? ny mpitondra ve ? ny mpanohitra ve ? ny mpianatra ve ? ny mpivarotra ve sa iza ? Tsy fantatra hoy izy, fa mandra-piandry izany fikomiana goavana izany dia izy no miezaka miala amin’izay fiankinan-doha izay ! Izy aloha no miezaka miaina isan’andro ny fahaleovantena satria « ny tena fahaleovantena dia miantomboka aminao aloha »
Ramose M sy ny fahaleovantenany
Fihetsika voalohany anehoany izany ny tsy fiankinan-dohany amin’ny JIRAMA. Ahoana hoy ianao no anatanterahany izany ? Mampiasa ireny takelaka fisintonana herin’ny masoandro ireny izy ao an-tokantranony. Roa hetsy Ariary (200 000 Ar) hoy izy dia nahazoana ny fitaovana sy nametahana ny pitsopitsony rehetra mikasika herinaratra ao an-trano. Izao izy tsy ampitambazin’ilay mpamatsy herinaratra tokana eto Madagasikara amin’ny fahatapatapahana. Tsy vitan’izany fa tsy mila mandoa vidin-jiro isam-bolana intsony izy.
Manaraka izany, bisikileta no fitaovam-pifamoivoizana entiny na aiza na aiza, eny na rehefa mandeha mampianatra izy. Mba tsy hiankinan-doha amin’ny fitateram-bahoaka sy ny solika no antony anaovany izany ary eo ihany koa ny finiavany hiaro ny tontolo iainana sy hitaiza vatana. Izao, sady tsy misy fiantraikany aminy mivantana ny fiakaran’ny vidin-tsolika no tomady ery i ramose.
Izaho koa, hoy izy nanohy ny fanazavany, tsy mba mamonjy dokotera izany fa fitsaboana nentim-paharazana ihany ny ahy. Ireny tambavy natoron’i Bebenay ireny no ampiasaiko raha sendra tsy salama aho. Indraindray aza lazain’ny sasany fa mpanompo sampy sy minomino foana aho satria mandala ny fomba-drazana fa tsy mampaninona ahy izany.
Tokony havaozina ny rafi-panabeazana
Amin’ny maha mpampianatra azy dia naneho hevitra momba io sehatra io ihany koa i ramose. « Marina fa ao anatiny aho, fa ao mihitsy no tena ahitako fa tsy izy mihitsy io rafi-pampianarana eto amintsika io fa na ny vazaha aza tsy tia an’io ! » Efa nisy fotoana izy niara-niasa tamina vazaha nanatanteraka ireny tetikasa fampandrosoana ireny tany ambanivohitra tany ka fanabeazana ny zanakin’ny tantsaha no anjara asany. Niara-namolavola fandaharana manokana izy ireo mba hampitana fahalalana sy fahaiza-manao amin’ireo ankizy. Tsy nanaiky ampiasa Ilay programam-pampianarana ofisialy iny manko ireo frantsay tompon’ny tetikasa satria tsy mifanaraka amin’ny zava-misy any an-toerana iny. Niombon-kevitra tamin’izany i ramose sady gaga ihany. Izay mihitsy no azo ilazana ny rafi-pampianarana eto Madagasikara, tsy mifanaraka amin’ny zava-misy sady tsy hita ampiarina amin’ny fiainana an-davanandro. Raha ny tokony ho izy, hoy Ramose M dia mahay manamboatra ny tranony daholo ny Malagasy tsirairay, izany no fampianarana tokony atao voalohany.
Dia toy izay sy izay raha fintinina ny resaka nifanaovako tamin’i ramose M. Hoy izy namarana azy : «misaotra nitafatafa fa mahavelom-panantenana ny mahita fa misy tanora toa anao izao ! Aza kivy mitolona fa tsy maintsy tafita i Madagasikara ».
Hoy i Gandhi « aoka ho ianao no ilay fiovana tianao ho hita eo amin’izao tontolo izao ». Raha mba toa an-dramose M daholo ny toe-tsain’ny Malagasy rehetra dia hivoatra sy hahaleo tena ity tanindrazantsika ity. Tsarovy fa miainga avy amin’ny tsirairay ny fiovana, miantomboka aminao ny fiovana !
fahaleovan-tena, fahaleovantena, fandraisana andraikitra, fandrosoana, fiovana, mpitarika, rafi-pampianarana